Ihe kacha mma smartwatches inye na Father'sbọchị Nna | Gam akporosis
Ihe kacha mma smartwatches inye na Nna Day
Ụlọ Ignatius | | smartwatch
Anyị mechara usoro nke isiokwu na iji nye Father'sbọchị Nna na-esote ya smartwatches kacha mma dị ugbu a n'ahịa. Na mbụ, anyị egosila gị nke bụ smartphones y mbadamba inye ụbọchị taa nna. Ọ dị mma, ha bụ naanị ngwaahịa elektrọnik, mana ọ bụ ihe mmeri mgbe niile.
Ọ na-abụwanye ihe a na-ahụkarị ịbịakwute ndị ọrụ nke ọgbọ ọ bụla na-eji mgbaaka atụ ma ọ bụ smartwatch eme ihe nata ọkwa, zaa oku mana karịa ihe niile iji nyochaa ọrụ egwuregwu gị, otu n'ime ọrụ ndị mara mma nke wearables (ịkọwa ọla aka na smartwatches).
1 Quantifying mgbaaka vs Smartwatch
1.1 Quantifying mgbaaka
2 Angụta mgbaaka maka ihe na-erughị euro 50
2.2 Na-asọpụrụ Band 5
3 Smartwatches maka ihe na-erughị euro 100
3.2 Huawei Watch Kwesịrị Ekwesị
4 Smartwatches maka ihe na-erughị euro 200
4.1 Huawei Watch GT2 Egwuregwu
4.2 Galaxy Lee na-arụsi ọrụ ike
5 Smartwatches maka ihe na-erughị euro 300
5.1 Galaxy Watch Ọrụ 2
5.2 3 Galaxy Cheta
6 Ego gị ịzụrụ na Amazon
Quantifying mgbaaka vs Smartwatch
Ihe mbu anyi kwesiri ima n’ahia ahia bu otu esi weputa ha: quantifying ma ọ bụ ọrụ wristbands y smartwatches.
N'otu aka, anyị na-ahụ mgbaaka quantifying, ihe eji eme band nke na-enyocha ọrụ anyị yana, dabere n'ụkpụrụ ahụ, na-enye anyị ohere na-enweta ificationsma Ọkwa ma ọ dịghị oku n'ofè ngosi.
Mbido nke mgbaaka quantifying bụ smartwatch, ngwaọrụ nke na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ otu ọrụ ahụ dị ka mgbaaka, mana nke na-enyekwa anyị ohere ịkpọ ma zaa oku, wụnye ngwa ndị ọzọ, jiri ya dika GPS, zipu ma nata ozi ...
Na mgbakwunye, ụfọdụ ụdị na-enye gị ohere ịgbakwunye SIM na ịkpọ oku na site na itinye GPS iji nwee ike ịpụ egwuregwu n'emeghị ekwentị ọ bụla ka o wee nyochaa ụzọ anyị na-eme.
Mbadamba ụrọ gam akporo kacha mma inyefe n'ụbọchị Nna
Angụta mgbaaka maka ihe na-erughị euro 50
La eze nwanyị zuru oke nke ahịa Otu n'ime ọla aka na-agbakọ bụ Mi Band 5. Ihe nlere a na-enye anyị uru kachasị mma maka ego na ahịa. Tụkwasị na nke a, ọ na-enye anyị ohere ịgbanwere eriri maka ndị ọzọ ọla iji nye ya ihe na-adọrọ mmasị.
Na usoro nke ọrụ, ihe nlereanya a nyochaa ihe egwuregwu ọ bụla na anyị na-eme, na-egosi ọkwa anyị na-enweta na ama anyị (ozi, oku ...), nyochaa ụra, tụọ ụda obi ... Batrị ahụ na-adịru ụbọchị 20 n'agbanyeghị agbanye agba ihuenyo.
Ọnụahịa nke Mi Band 5 na Amazon bụ euro 27,16.
Na-asọpụrụ Band 5
Ihe ọzọ na-adọrọ mmasị na Xiaomi Mi Band 5 bụ Honor Band 5, mgbaaka nke na-enye anyị otu atụmatụ dịka ụdị Xiaomi. tinyere agba agba. Isi ihe dị iche ya bụ na ihe nlereanya a na-enyocha ọkwa ikuku oxygen na mgbakwunye na ịchọpụta egwuregwu anyị na-eme na akpaghị aka.
Ọnụahịa nke Honor Band 5 bụ euro 32,99 na Amazon.
Ihe ngwọta nke Samsung na-enye ndị ọrụ na-atọ ụtọ ịzụrụ mgbaaka a na-akpọ Fit2, mgbaaka nwere mkpụrụ obi na nyocha ụra, ọnọdụ ọzụzụ, mmiri na-eguzogide mmiri ruo mita 50 na ọsụsọ.
Ihe mgbaaka a di nma ma oburu na inwere Samsung Samsung, ebe obu na etinye data niile n'ime ngwa Samsung Health. Samsung Galaxy Fit2 dị onu ahia na 34 euro na Amazon.
Kacha mma smartphones na-enye na Nna Day
Smartwatches maka ihe na-erughị euro 100
Maka euro 52, anyị nwere ike ịnweta Xiaomi Mi Watch Lite, smartwatch nke ahụ gụnyere GPS, njikwa ọnụọgụ obi na nleba anya ụra ma tinye usoro ọzụzụ iri na otu. Ihuenyo ahụ bụ sentimita 11, ọ bụ mmiri na-eguzogide mmiri ruo 1,4 ATM, ihe karịrị 5 nhazi ihuenyo
El A na-ere Xiaomi Mi Watch Lite na euro 52 na Amazon.
Huawei Watch Kwesịrị Ekwesị
Huaweidị Huawei a, dị maka naanị euro 79, na-ejikwa ihuenyo AMOLED nke 1,64, batrị na-adịgide ruo ụbọchị iriỌ gụnyere ụdị ọzụzụ 96, GPS ma na-eguzogide ọgwụ ruo 5 ATM nke nrụgide. Gụnyere nlekota nke ikuku oxygen, ọnụọgụ obi na ọrụ ihi ụra.
Ụgwọ nke Huawei Watch Fit bụ euro 79 na Amazon.
Smartwatches maka ihe na-erughị euro 200
Huawei Watch GT2 Egwuregwu
Huawei's Watch GT2, bụ ụdị egwuregwu ya, ọ na-enye anyị a obodo kwụụrụ aka rue izu abụọ, 1,39 inch ihuenyo mmetụ na AMOLED teknụzụ, GPS, usoro ọzụzụ 15. Ogo nke smartwatch a bụ 46 mm, ọ na-enye anyị ohere ịlele ikuku oxygen n'ime ọbara, ọnụọgụ obi ma nyochaa ọrụ anyị mgbe anyị na-ehi ụra.
Pricegwọ nke smartwatch a mara mma bụ Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla..
Galaxy Lee na-arụsi ọrụ ike
Ihe ngosi Watch Galaxy, dị na otu nha nke 40mm Ọ na-etinye mgbawa NFC nke na-enye anyị ohere ịkwụ ụgwọ site na nkwojiaka, ọ bụ mmiri na-eguzogide mmiri ruo 5 ATM nke nrụgide ma na-enye anyị ohere nyochaa ọrụ egwuregwu na ụra. Ọ na-enye anyị ngalaba dị iche iche anyị nwere ike ịhazi iji gosipụta ozi gbasara ngwa ndị anyị arụnyela.
Ụgwọ nke Ihe nkiri Galaxy Watch bụ euro 129.
Smartwatches maka ihe na-erughị euro 300
Galaxy Watch Ọrụ 2
Ọgbọ nke abụọ nke usoro gara aga bụ 2 na-arụ ọrụ, smartwatch dị na nha 40 na 44 mm, na nchara na aluminom rụchara. Ihuenyo bụ Super AMOLED nke 1,35-anụ ọhịa, na-enyocha ihe omume 36 na-akpaghị aka, na-eguzogide 5 ATM nke nrụgide na Ọ dị site na euro 209 na Amazon.
3 Galaxy Cheta
Ihe ngosi 3 nke Galaxy bu ihe nlere ohuru nke Samsung malitere n’ahịa. Emere ya n'ime igwe anaghị agba nchara, nwere ihuenyo Super AMOLED echekwara na teknụzụ Gorilla Glass iji mee ka ihuenyo ahụ dị ka ụbọchị mbụ.
Ọ bụghị naanị na-enyocha ọrụ egwuregwu, ụra na obi, kamakwa atụle oxygen n'ọbara na mgbakwunye ịda, Ọ bụ otú ahụ ezigbo maka ndị agadi nke ahụ nwere ike ịnwe ihe egwu nke ịda.
El Galaxy Watch 3 dị na Amazon maka euro 320.
Ego gị ịzụrụ na Amazon
Amazon na-enye anyị ohere nke inwe ike ịkwụ ụgwọ ịzụrụ n'etiti euro 75 na 1000 n'etiti nkeji 4 site na kaadị kredit gị. You nwere ike ile anya na atụmatụ a ọ na-enye anyị na ibe weebụ a na ọ bụ ezigbo nhọrọ ịbanye n'ụwa nke ihe eji ejiji, karịsịa ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ụdị na-enye arụmọrụ na ogo nke ihe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » smartwatch » Ihe kacha mma smartwatches inye na Nna Day
Ngwa 9 kachasị mma maka ngwa maka gam akporo
Nyocha nke Wiko View 5, batrị na ọtụtụ ndị ọzọ